Aqoon-kororsi u furmay boqol ka mida ciidamada ammaanka Puntland, xilli ay sii badanayaan dilalka qorshaysan. – Radio Daljir
Aqoon-kororsi u furmay boqol ka mida ciidamada ammaanka Puntland, xilli ay sii badanayaan dilalka qorshaysan.
Garoowe, April 11 – Tababar aqoon-kororsi ah oo ku aaddan fahamka shuruucda la dajiyo iyo tan shareecada Islaamka ayaa maanta (Isniin) loo furay in kabadan boqol askari oo ka tirsan ciidanka bilayska kana howlgala gobollada Mudug iyo Sool.
Tababarkan oo socon doona bil ayaa waxa uu ka furmay xarunta taliska ciidanka bilayska ee gobolka Nugaal. Ciidamada loo furay tababarka aqoon-kororsiga ah ayaa waxay ay horay uga howl-gali jireen magaalooyin ku yaal gobollada Mudug iyo Sool, sida Gaalkaycyo, Laascaanood iyo Tukaraq.
Sareeye Guuto Cali Nuur Cumar, taliyaha ciidanka boliska, asluubta, nabadgalyada iyo dhaqan-celinta dawladda Puntland oo furay tobabarkaan ayaa kula dardaarmay ciidamadii tabarka loo furay in ay kasoo baxaan doorka loogu talagalay ee u adeegidda dalka iyo dadka. S. Guuto Cali waxa uu sheegay in askari walba lamarsiin doono dhaar ku aaddan in uu u shaqeeynayo si daacadnimo ah waxana taliyuhu kula dardaarmay askarta in marka ay dib ugu noqdaan gudashada waajibaadkooda ay si wanaagsan u dabakhaan aqoonta ay ka kororsan doonaan tababrkan, wuxuuna sidoo kale ku adkeeyay in ay la dagaallmaan musuqmaasuqa iyo laaluushka.
Waxa jira eedaymo ku saabsan in qaar ka mida askartu ay ku dhaqmaan arrimo ay ka mid yihiin laaluulsh-qaadashada, kuwaas oo uu taliyuhu sheegay in ay la kulmi karaan cawaaqib xun iyo sharaf-dhac.
kani waa tabarkii afaraad ee caynkiisa oo kale ah oo loo qabto ciidamamada ammaanka iyadoo tabarkaani kii ka horeeyay uu soo xiray madaxweynaha dawladda Puntlnad Cabdiraxmaan Maxamed Faroole.
Tababrkani ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo in badan oo ka mida amni darrada ka taagan magaalooyinka waawayn ee Puntland loo aneeynayo tayo-xumida ciidamada kala duwan ee sugidda ammaanka, waxana dadka wax falanqeeya ay tilmaamayaan in loo baahan yahay kordhinta tababaradda caynkan oo kale ah, taasoo markeedana wax muuqda ka qaban karta kor u qaadidda ammaanka guud ee dalka iyo dadka.